The usoro mpikota onu a video n'ozuzu na-agụnye resizing a video akụkụ, decreasing etiti size na bit ọnụego nke video faịlụ. Mbenata video clip na Apple si QuickTime Player kwesịrị ịzụ mmelite version maara dị ka QuickTime Pro (ebe Free mbipụta nke QuickTime Player adịghị ekwe ka n'ihi compressing ma ọ bụ ọ na-ezipụ video) na-agba ọsọ site ya ahaziri bupu usoro.
Eso nzọụkwụ na-achọrọ ịrụ a video mkpakọ iji QuickTime Player Pro:
Nzọụkwụ 1. Download QuickTime ma melite ya pro version
Download QuickTime Pro si saịtị a na-ekweta na usoro ojiji na wụnye ya na kọmputa gị. Ịzụta Ikikere ya ebe ọ bụ mbupụ na video mkpakọ menu na-nyeere n'ihi ugwo mbipute a ọkpụkpọ. Họrọ software ntọhapụ dabeere na gị sistemụ n'ihi na e nwere abụọ dị iche iche ụdị azụmahịa tọhapụ: Zụrụ Windows na Zụrụ Mac.
Nzọụkwụ 2. Tinye faịlụ ka usoro ihe omume
Na nke a nzọụkwụ, onye ọrụ na-aga "File" NchNhr na pịa "Open File" na-egwu a video clip. Mgbe ahụ a faịlụ nchọgharị window ga-emeghe ịhọrọ ọ bụla video faịlụ. Ugbu a, ị nwere ike ịme nchọgharị gị faịlụ na-emeghe a video na na na ya. Nke a video ga-eji dị ọsọ ọsọ video maka mpikota onu ọrụ.
Nzọụkwụ 3. mmekọrịta ụda na video
Play gị nkiri na-eme ka n'aka na ụda syncs elu na video. Ọ bụrụ na ụda amalite kwa n'oge pụrụ ịdị gị mkpa tinye ụfọdụ audio dịanyā na mmalite iji nweta ya ka mmekọrịta, nke a na-adị mfe mere na ọzọ omume karịa n'ime QuickTime.
Mgbe gị na ọdịyo na video na-synced ị dị njikere mbupụ faịlụ maka ojiji na weebụ.
Nzọụkwụ 4. Export video
Pịa "File" taabụ ma họrọ "Export" na-emeghe "Zọpụta exported File Dị ka" ihuenyo. Ugbu a pịa na "Export" nhọrọ na ala nke menu na họrọ "Movie ka QuickTime Movie" nhọrọ maka ọdịyo na video ntọala.
Nke a ga-eduga ndị na-esonụ ngalaba ebe ị nwere ike tinye aha ọhụrụ maka ọhụrụ emepụta nkiri faịlụ. Biko pịa "Nhọrọ" bọtịnụ na ala nke ọdịyo na video ntọala.
Nzọụkwụ 5. ịgbanwe ntọala
Mgbe ịpị "Nhọrọ" button-esonụ na ihuenyo ga-abịa. Ebe a, ị ga-ịgbanwe ntọala n'okpuru "Video" na "Sound" nhọrọ maka oru oma mkpakọ.
Nzọụkwụ 6. ịgbanwe mkpakọ ụdị
Ugbu a họrọ "Mwube" button ịgbanwe "mkpakọ ụdị" gị video ka otu na a nta bit ọnụego. Mbenata video size nwere obere bit nke ọchịchịrị visual mma. E nweghị idoanya kpọmkwem nke ntọala nke ga-irè na otu video àgwà ga-anọgide otu maka ndị ọzọ video faịlụ mgbe mkpakọ. Ndị na-esonụ video gaghị agara na-etinyere dị ka na-amalite maka H.264 mkpakọ.
Ịgbanwe video akụkụ na etiti size, pịa "Size" button ma họrọ otu nke ala sizing nhọrọ. Ndị na-esonụ video ntọala na-eji ebe a:
Method: 2-Pass VBR
Data ọnụego: 466 kbps
Etiti Size: 576 W 432H
Akụkụ ruru Nhọrọ: Nọgide Na-enwe akụkụ ruru
Etiti ọnụego: 1: 1 etiti / Sec
Key ụba ọ bụla: 100 okpokolo agba
N'ihi na Audio ngalaba, iji na-eso nkọwa:
Sample ọnụego: 22050
Nzọụkwụ 7. Malite mpikota onu usoro
Pịa "OK" ugboro abụọ iji ụzọ ọpụpụ si ntọala na azụ ka "Save exported File Dị ka" ihuenyo. Fanye a aha ọhụrụ maka site abịakọrọ faịlụ na ịtọ a ọnọdụ na kọmputa ike mbanye iji zọpụta ya.
Pịa "Zọpụta" button na-amalite compressing na exporting video.
Na n'elu ihe atụ, ihe mbụ file size bụ 300 MB na abịakọrọ site H.264 mkpakọ usoro. Ma e nwere ụfọdụ ndị ọzọ codec maka compressing ọ bụla video faịlụ. Audio mkpakọ agaghị nnọọ irè na okwu nke size Mbelata. Ebe a, a comparative analysis maka dị iche iche codec e nyere na mbụ ahụ faịlụ. All àgwà configurations bụ ọkọlọtọ configurations, otu sizing, na etiti ọnụego a nọ na-agbanweghi agbanwe dị ka ihe mbụ weghaara nkiri, isi okpokolo agba na-setịpụrụ akpaka n'ihi na nke a analysis.
191,02 kbps 1,03 MB Ọ bụ ụkpụrụ codec maka video nkwurịta okwu na mkpakọ.
163,11 kbps 904,92 KB Ọ na-ọhụrụ ẹkenam codec maka QuickTime Pro 7. Belata size rụọ ọrụ nke ọma.
256 kbps 1,38 MB Ọ na ọtụtụ-eji codec. Àgwà nke abịakọrọ video na-anakwere na doro anya. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na anyị na-atụnyere nke a na H.264, faịlụ size (itinye na koodu na Sorenson Video 3) bụ banyere 56% karịa otu faịlụ itinye na koodu na H.264.
68,18 kbps 378,21 KB Àgwà dị adịghị mma. Video na-itinye na koodu na nnọọ ala bit ọnụego.
277,83 kbps 1.5 MB The video àgwà nke a MPEG-4 bụ adịghị amasị. MPEG-4 codec Usoro ọhụrụ karịa Sorenson Video 3. Ọ ana achi achi àgwà na elu bit-ọnụego ma abịakọrọ size bụ ntakịrị elu dịtụ.
Olee otú mpikota onu Videos na Mac Finder Fast na Mfe
Ntak ike m QuickTime video Bubata iji iMovie
> Resource> QuickTime> Olee mpikota onu a Video na QuickTime Player Pro